Safe Start in Somali - King County
Sidee King County si tartiib ah dib ugu furi doontaa ganacsiyada maxaliga ah iyo isu imaanshaha bulshada
Wada shaqeynta, beesheena ayaa hoos u dhigtay faafitaanka COVID-19. Hadda, King County waxay ka shaqeyneysaa inay si tartiib ah oo taxaddar leh dib ugu soo celiso dhaqaalaha maxaliga ah.
Qorshaha gudoomiyaha ee “Bilowga Badbaadada” Gobolka ee dib loogu furayo wuxuu leeyahay afar weji. Qorshuhu wuxuu u oggolaanayaa hawlo dheeraad ah wejigi kasta oo ku saleysan xaddiga jirada COVID-19. Waxay kaloo kuxirantahay in bulshada ay ka gaabin karto fiditaanka COVID-19.
Degmooyinku waa inay ku nagaadaan heer kasta oo ah bilowga badbaadada ugu yaraan saddex asbuuc, ilaa inta masuuliyiinta caafimaadku ay cabbirayaan horumarkooda xagga baabi'inta fayraska.
King County hada waa loo ansaxiyay Wajiga 2aad ee Qorshaha Gudoomiyaha Gobolka.
Tilmaamaha gudoomiyaha ee badbaadada dib ufuritaanka magaalada
Dhammaan ganacsiyada waa inay buuxiyaan shuruudaha caafimaad ee uu gobolku ku qeexay Wajiga 2aad.
Ganacsiyadu waa iney:
Shaqaalaha baraan astaamaha kusaabsan COVID-19, muhiimadda gacmo-dhaqidda iyo joogitaanka 6 fiid u dhexeeya, iyo joogidda guriga markay jiran yihiin. Tan waa in lagu sameeyaa luqado ay shaqaaluhu fahmi karaan.
Ku dhejiyaan qaabsocod qoraal ah ee lagu ilaalinayo shaqaalaha iyo macaamiisha mid amaan ah, oo ay kujirto hagitaan joogista ugu yaraan 6 fiid u gaar ah, gacmo dhaqashada, xirashada wejiga iyo nadaafadda goobaha shaqada.
Hubsadaan nadiifinta iyo jeermiska joogtada ah ee meheradda, gaar ahaan dusha sare oo si joogto ah u taabanaya.
Siiyaan ilaalin shaqaalaha xiriirka dhaw la leh dadka kale, sida daboolka wejiga iyo carqalada jirka markii aysan suurta gal aheyn in 6 fiid looga jiro.
Shaqaalaha laga helay cudurka COVD-19. Hubso in shaqaalaha xanuunsan ay joogaan gurigooda. Waxaa laga mamnuucay inay ceyriyaan shaqaale kasta oo kiciya walaac caafimaad iyo badbaado ama guri ku jooga maxaa yeelay waxay ka shakisan yihiin inay qabaan fayras.
siiyaan gacmo dhaqitaan joogto ah oo waxaad siisaa saabuun gacmo dhaqid. Bixi galoofisyada la tuuro markii ay ku habboon tahay si looga hortago faafitaanka jeermiska adoo adeegsanaya aaladaha la wadaago iyo qalabka kale.
Hawlaha loo oggol yahay wax ka beddelka Wajiga 2:
Dhammaan howlaha waa inay raacaan tilmaamaha amniga guud ee dib loogu furayo iyadoo loo eegayo Wajiga 2 ee Qorshaha gudoomiyaha ee bilaabidda nabadoonka gobolka.
Haddii xeerarkaasi la raaco, meheradahan iyo waxqabadyadan waxaa loogu oggolaan doonaa degmada King County:
Wajiga 2aad Hawlaha la oggol yahay iyo Xaddidinta
Hawlaha la oggol yahay Shaqaalaha tas-hiilaadyada bannaanka ee dibedda laga shaqeeyo, ATV hagitaan, isboorti fuushan, iyo faras fuushan, kalluumaysiga hagaysa, jidadka-gawaarida-gawaarida, xarumaha ORV / gawaariga wareega, iyo matoorrada-kaliya ee ka-qeybgaleyaasha, gondolas, zoos iyo aquariums, iyo dhammaan howlaha kale ee la midka ah.
Guud ahaan waxaa ku xaddidan kooxo shan ka-qaybgale ah ama ka yar, xaaladaha qaarkood illaa 12 qof ama saddex qoys ayaa loo oggol yahay.
Hawlaha waxaa laga yaabaa inay shaqeeyaan marka loo eego hagida badbaadada ee Guddoomiyaha Gobolka.
Hawlaha la oggol yahay:
shaqaalaha jimicsi gudaha ah oo shaqeeya oo bixiya tilmaamo gaar ah oo loogu talagalay tababbarka jir ahaaneed ee u baahan helitaanka qalab takhasus leh, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn jimicsi, jimicsi iyo tababbarka, farshaxanka fanka, yoga, iyo adeegyo jimicsi hoggaamineed oo hoggaamiya iyo sidoo kale tas-hiilaad tennis gudaha ah.
Dhamaan nashaadaadka jimicsiga banaanka ayaa laga yaabaa inay ku shaqeeyaan guud ahaan wax aan ka badnayn shan qof oo ka baxsan guriga (marka laga reebo macalinka).
istuudiyaha jimicsiga gudaha ayaa ku xaddidan mid mid keliya ah.
Raac tilmaamaha badbaadada ee Gudoomiyaha Gobolka ee dib u furista (kor lagu sharaxay)
Isu imaanshaha bulshada
Kaliya waxaa loo oggol yahay bannaanka in ka badan shan qof ama ka yar oo ka baxsan guriga.
Dhismaha oo dhan ayaa loo oggol yahay inuu dib u bilaabo.
Raac tilmaamaha amaanka ee Gudoomiyaha
Hawlaha wax soo saarka Hawlaha oo dhan way shaqeyn karaan iyagoo raacaya tilmaamaha badbaadada ee Gobolka ee dib-u-furista (kor lagu sharaxay)
Hanti maguurtada (deegaanka iyo ganacsiga)
J Guud ahaan waxay xaddideysaa howlaha ka baxsan xafiiska ballanta oo keliya oo aan ka badnayn saddex qof
Hawlaha xafiiska waxay u baahan yihiin boos celin adeegyada macaamiisha shaqsiyadeed iyo degenaanshaha martida waxay ku xaddidan yihiin 50% deganaanshaha dhismaha.
Raac Tilmaamaha gudoomiyaha ee amniga
Adeegyada gudaha guriga
Howlaha la oggol yaha: shaqaale kasta (saacadle, mushahar, qandaraasle madax-bannaan, waqti-buuxa, waqti-dhiman, ama ku-meel-gaar ah) oo lagu bixiyo hal ama in ka badan oo loo-shaqeeye ah oo siiya adeegyo guri qof ama qoys ku jira guri gaar loo leeyahay sida nanny, nadiifin guri, kariye , khabiir qaas ah, ama maamule guri
Raac tilmaamaha gudoomiyaha ee amniga.
Tafaariiqda dukaanka dhexdiisa
Joogitaanka degenaanshuhu kama badan karo boqolkiiba 30 awooda.
Hawlaha tafaariiqda aasaasiga ah way sii wadi karaan inay ku shaqeeyaan sida ku xusan xeerarka gobolka ee jira.
Raac tilmaamaha amaanka ee gudoomiyaha ee dib u furida (kor lagu sharaxay)
Howlaha la oggol yaha: Dhamaan adeegyada shaqsiyadeed oo ay ka mid yihiin Cosmetologists, Xaraashka timaha, Baarayaasha, Estheticians, Master Estheticians, Manicurists, Nail Salon Shaqaalaha, Electrologists, farshaxanada joogtada ah, farshaxanyaasha Tattoo, Iskuulka Cosmetology iyo iskuulada Esthetics.
tirada macaamiisha ayaa laga yaabaa inaysan ka badnayn 50% tirada macaamiisha guud ee sida caadiga ah u heli kara adeegyada, ama 1 qof haddii ay tahay hal sariir / kursi oo istuudiyaha ah.
Adeegyada xirfadleyda ah
Howlaha la oggol yahay: Xisaabaadka, naqshadeeyeyaasha, qareennada, injineerrada, la-taliyayaasha dhaqaalaha, farsamada tikniyoolajiyadda, wakiillada ceymiska, canshuur-bixiyeyaasha, iyo shaqooyinka kale ee xafiis-ku-saleysan ee sida caadiga ah ugu adeega saldhig macaamiil.
Joogitaanka hay'addu ma ka badnaan karto 50% marka laga reebo adeegga hal-hal-qof oo si buuxda looguxiro
Adeegyadu waa inay ahaadaan ballan oo keliya iyo hal macmiil (iyo xubin qoyska ka mid ah, haddii macmiilku yar yahay) wakhti kasta oo la helo
Fadhiyada kooxda lama oggola haddii kooxdu ka koobnaato qoys deg deg ah oo keliya
Joogitaanka hay'addu ma ka badnaan karto 50%
Cuntada bannaanka dibedda waxaa loo oggol yahay 50% ee awoodda oo aan lagu tirinaynin xadka dhismayaasha dhismaha. Miisaska iyo kuraasta waa in lagu dhejiyaa 6 fiit, in kasta oo kuraas dheeri ah loo oggol yahay haddii la raacayo habdhaqanka ugu wanaagsan ee Caafimaadka Dadweynaha - Seattle & King County.
Makhaayadaha ayaa waliba u baahan doona inay maraan nidaamka caadiga ah ee magaaladooda dhexdeeda si ay u helaan oggolaansho in lagu ballaariyo kuraasta bannaanka. Haddii maqaayadda ay ku taallo King County oo aan la aqoonsan, oggolaanshaha waa inuu maraa King County.
Adeegyada cuntada ee gudaha waxaa laga yaabaa inay ku shaqeeyaan 50% awooda haddii miisaska iyo kursiyadu ay ka badan yihiin 6 fiit midba midka kale.
Raac tilmaamaha amniga ee Gudoomiyaha
Guud ahaan waxay xaddidaan adeegyada gudaha si ay uga yar yihiin: 25% awooda ama 200 shaqsiyaad illaa iyo inta ay u dhexeysa 6 fiidh gaar ahaan qoysaska kala socda.
Guud ahaan waxay xaddidotaa adeegyada guriga / la-talinta ugu badnaan shan shaqsi.
Howlaha dibeddu waxay lahaan karaan ilaa 100 qof.
Xadidista awooda kuma jiraan shaqaalaha urur, laakiin waxay kujirtaa mutadawiciin.
Howlaha la oggol yahay: Dhamaan qolalka kaararka ama nashaadaadka la midka ah.
Guud ahaan waxay xaddideysaa qolka kaarka mid kastoo ka yar: kartida 25% qolka ama 50 shaqsiyadeed
Makhaayadaha ama meelaha jiifka ah ee xarunta ayaa looga baahan yahay inay raacaan hagida wejiga 2, taas oo xadideysa awoodda 50% oo mamnuucaysa adeegga baararka. Ciyaaruhu sidoo kale waxay ku xadidan yihiin 25% deganaanta miis kasta. Xaddidista awooda kuma jiraan shaqaalaha.
Howlaha la oggol yahay: Dhammaan maktabadaha dadweynaha, nidaamyada maktabadda dadweynaha, maktabadaha hay'adaha iyo dowladda, iyo maktabadaha xarumaha waxbarashada sare.
Waxay xaddidaysaa adeegyada si loo diro ama loo joojiyo qaadista
Maktabadaha ayaa haddii kale loo xiray dadweynaha
Gaari marista shaneemadaha
Jawaabaha ku saabsan su'aalaha dib-u-furitaanka tartiib ta ah ee King County
1. Goorma ayay ganacsiyadu u furi karaan wajiga 2aad?
Ganacsiyada waxay furmi karaan oo keliya ka dib markay awoodaan inay la kulmaan dhammaan tilmaamaha amniga guud ee uu dajiyay Guddoomiyaha Gobolka. Xeerarka nabadgelyadu waxay ku xaddidaan ganacsiyada heer u saamaxaya in meel bannaan ay ka dhexeyso dadka.
2. Sidee Gobolku go'aan uga gaarayaan dib u furista?
Go'aannada waxay ku saleysan yihiin bal in degmadu ay maamuli karto faafitaanka cudurka ee bulshada dhexdeeda.
Si go'aannada loo gaaro, khubarada caafimaadku way kormeerayaan
tirada kiiska COVID-19 ee gobolka
haddii qofkasta oo qaba astaamaha COVID-19 iyo kuwa qaba halis sare ay markiiba heli karaan baaritaano
haddii dadka leh COVID-19 ay si dhakhso leh u go'doomi karaan oo ay u aqoonsan karaan cidda xiriirka dhow la lahayd si ay iyaguna u go'doomiyaan
awooda lagu difaacayo dadka aadka u nugul
inay cosbitaaladu diyaar u yihiin inay wax ka qabtaan wixii kordha ee bukaannada COVID-19 ah.
Waxaad kula socon kartaa horumarka King County xagga isbeddeladaan Indicators dashboard
3. Yaa fulin doona xeerarka
Ganacsiyada Washington ee ku xadgudba amarrada guddoomiye Inslee waxaa loo tixraaci karaa oo lagu ganaaxi karaa xaaladaha goobta ee badbaadada ah ee goobta shaqada. Waaxda Shaqaalaha iyo Warshadaha Gobolka Washington ayaa xoojin doonta qawaaniinta. Waxaad u soo sheegi kartaa cabashooyinka amniga iyo shaqada goobta Xarunta Shaqada iyo Warshadaha Gobolka: 1-800-423-7233.
4. Yaan kala xiriiri karaa haddii aan qabo su'aalo ku saabsan sida Wajiyada "Bilowga Badbaadada" ee Gobolka uu u saameeyo ganacsigeyga?
Wac khadka King County ee COVID-19 Community iyo Ganacsiga khadka Qaanuunka ah: 206-296-1608. Weydiiso turjubaan adoo ku dhahaya magaca luqadaada Ingriis.
5. Markii dadku isu yimaadaan waxbadan
Aad ayey uga muhiimsantahay in la raaco tilmaamaha badbaadada ee guusha u horseeday fiditaanka. Kuwaas waxaa ka mid ah in ugu yaraan 6 fiid looga fogaa dadka kale, yareynta xiriirka lala yeesho dadka kale ee guriga ka baxsan, gacmo dhaqida had iyo jeer, ku labista dharka wejiga daboola dadweynaha, iyo ka fogaanshaha kulammada kooxda.